सनराइजको ब्याज आम्दानी बढे पनि खुद नाफा र प्रतिशेयर आम्दानीमा भने गिरावट| Corporate Nepal
सनराइजको ब्याज आम्दानी बढे पनि खुद नाफा र प्रतिशेयर आम्दानीमा भने गिरावट
माघ १०, २०७८ सोमबार ०८:०६
काठमाडौं । सनराइज बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ७४ करोड ५५ लाख रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सोमबार सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यो मुनाफा गत बर्षको सोही अवधिभन्दा २१.४७ प्रतिशत कम हो । गत बर्ष बैंकले ९४ करोड ९४ लाख कमाई गरेको थियो ।
सनराइजको खुद नाफासँगै सञ्चालन मुनाफा पनि घटेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.८० प्रतिशत बढे पनि सञ्चालन मुनाफा भने २१.५९ प्रतिशत घटेको छ । पुस मसान्तसम्ममा सनराइजको वितरणयोग्य मुनाफा १० करोड ११ लाख रुपियाँ रहेको छ।
बैंकको खुद नाफासँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २० रुपियाँ १ पैसा रहेको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी यस बर्ष सोही अवधिमा घटेर १४ रुपियाँ ७४ पैसामा झरेको छ।
समीक्षा अवधिसम्म सनराइजको चुक्ता पूँजी ६.६५ प्रतिशतले निक्षेप २१.४३ प्रतिशतले र कर्जा १९.८० प्रतिशतले बढेको छ भने जगेडा कोष ०.७८ प्रतिशतले घटेको छ। सो अवधिसम्म बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २०.३६ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १५१ रुपियाँ ७९ पैसा छ।
बैंकहरुको ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ ३० प्रतिशतबाट घटाएर अरुसरह बनाउन सिविफिनको माग
किसान लघुवित्तले सात करोड ८५ लाख रुपियाँको बोनस शेयर वितरण गर्ने, साधारणसभा कहिले ?
नेपाल बैंकले धुलिखेलमा गर्यो बजेट गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रम
एनबीलाई गाभ्ने प्रस्ताव पारित गर्न आज नविलको विशेष साधारणसभा, कस्तो हुनेछ नयाँ नविल ?
मेगा बैंकले आईडीई नेपालसँगको सहकार्यमा २५ सय किसान कार्ड वितरण गर्ने
लुम्बिनी विकास बैंकले गर्यो दुई नयाँ शाखा बिस्तार